मजदुरहरुलाई छाक टार्न धौधौ,राहत नपाएको गुनासो — JagaranMedia.Com
जागरण मिडिया प्रकाशित : २०७६/१२/२१ गते
घरमा खाने खर्च छैन, छोराछोरी भोक लाग्यो भन्छन कसरी छाक टार्ने हो ? कसरी बाच्ने हो ? यो दुखेसो हो बर्दिया घर भै बुटवलमा निर्माण मदजुरको रुपमा काम गर्ने हिरा थारु । उहाँका पाँच जनाको परिवार छ । श्रीमानसंगै मजदुरी गर्न छोराछोरीलाई लिएर बुटवल बस्दै आएको ४ वर्ष भएको बताउनु भयो । उहाँले कोरोना भाईरसको महामारीसंगै बन्दाबन्दी लम्बिदै जादा साझाबिहानको छाक टार्न पनि धौ धौ भएको गुनासो पोख्नु भयो । “काम गर्न पाए पैसा हो । अहिले काम पनि छैन, पैसा पनि छैन गाह्रो भएको छ । ” उहाँले भन्नु भयो । छोराछोरीले भोक लाग्यो खाजा, खाना के खानेर सोधछन्,मन अमिलो हुन्छ ।
काम गर्न ठाउँमा जस्ताले बारेर बसेको हिराको परिवारलाई जोहो गरेर राखेको पैसा,अन्नपात सकिए पछि कसरी पेट पाल्ने बन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ । अरु बेला त दुख गरेर भए पनि हामीले गुजारा चलाएकै थियौ,अफ्ट्यारो पर्दा सरकाले सहयोग गर्दिए हुने ,राहतको कुरा सुनेका छौ तर कतैबाट राहत पाएका छैनौ । उहाँले आफ्नो जस्तै समस्या धेरै दैनिक ज्यालादारी मजदुरको रहेका बताउनु भयो । बाहिर निस्कन छैन,हिजो आज दिनरात यहि झुपडिमा बितेको छ ।
यता रुप बहादुर थारुको पनि गुनासो उस्तै छ । उहाँ पनि निर्माण मजदुरको लागि बुटवल आउनु भएको हो । जीविका चलाउनका लागि १३ जनाको परिवार लिएर आएको बताउनु भयो । काम नगरि साझ बिहान खान पुग्दैन । बन्दाबन्दीले गर्दा छाक टार्न गाह्रो भएको दुखेसो गर्नु भयो । “परिवार ठुलो छ , साग शब्जी महगो छ, कसरी दैनिकी चलाउने हो तनाव भएको छ ।” गाउँ जाने तयारीमा रहेका रुप बहादुर र अन्य साथीहरु बन्दाबन्दीको मारमा परेर रोकिनु परेको छ । काम छैन,पैसा छैन खानेकुरा पनि छैन । बन्दाबन्धी कतिसम्म लम्बिने हो हामी जस्तो मजदुरहरुले कसरी गुजारा चलाउने हो भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
त्यस्तै बर्दिया राजापुरका राजु थारुको चिन्ता पनि साझबिहान कसरी हातमुख जोर्र्ने भन्ने नै छ । परिवार पाल्नका लागि मजदुरी गर्न उहाँ पनि बुटवल आउनु भएको हो । बन्दाबन्दीमा उता परिवारले के खाएका होलान भन्ने पिर छ, यता आफुले के खाने,के गर्ने भन्ने उस्तै पिर छ । उहाँकोले पनि काम नभए पछि पैसाको समस्या भएको र जेनतेन सरसापटि गरेर अहिले सम्म चलाएको छु अब के गर्ने हो ? साहुले पनि सबैलाई पाल्न सक्दैनन् । कसरी चल्ने हो थाहा छैन भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
हिरा ,रुप र राजु जस्ता असंगठित क्षेत्रका निर्माण मजदुरहरुको समस्या उस्तै छ । दिनभरी काम गरेर साझको छाक टार्नेहरुलाई दुईसाता लामो बन्दाबन्दीले निकै मारमा पारेको छ । उनीहरुले अहिले सम्म कहिकतैबाट राहत पाएका छन त ? न त गृह जिल्ला फर्कन पाएका छन ।
कोरोना संक्रमणका कारण पत्रकार शिवाको निधन
कोरोना संक्रमितलाई हौसला दिन बुटवल उप महानगरपालिका द्धारा घरदैलो
कोरोना कहरमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्यामा ५० प्रतिशतले कमि
रुपन्देहीमा थप एक हप्ता लकडाउन
कपिलवस्तुमा ८ दिन थपिदै भदौ १५ गतेसम्म लकडाउन लम्बियो
जागरण मिडिया सेन्टरका पुर्व उपाध्यक्ष परियारलाई ब्रुकलिन साइटेसन अवार्ड